Baahin: Arbaca, Sept 07, Weriye Jaamac C/raxmaan ~ Daljir ~ Galkacyo. Warbixin ku saabsan qoys Danish ah oo muddo ay afdub u haysteen burcad badeed Somali ah oo la siidaayey; Garaad Maxamed Cilmi Shirwac ayaan ka waraysanay dadaalada nabadeed ee colaada Galkacyo; Dallada nabadaynta gobollada Puntland oo shir lagu gorfaynayo colaadii Galkacyo uga furmay Galkacyo; Waftigii Puntland uga qayb galay shirka wadatashiga Somalida oo uga xog warrmay madaxda Puntland natiijada shirka wadatashiga. – Radio Daljir
Seteembar 7, 2011 12:00 b 0
Puntland iyo Galmudug oo galay heshiis cusub kadib is-faham darro dhawaan soo kala dhex gashay.